सत्ता र सघर्ष साथसाथ चल्न सक्दैन (अन्तरवार्ता) | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » सत्ता र सघर्ष साथसाथ चल्न सक्दैन (अन्तरवार्ता)
सत्ता र सघर्ष साथसाथ चल्न सक्दैन (अन्तरवार्ता)
SAHARA TIMES Thursday, February 23, 20170No comments
तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका युवा नेता बलराम यादव मधेशी नेताको कृयाकलापबाट असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । उहाँले मधेशी दलको यस्तो कृयाकलापबाट मधेशको मुक्ति सम्भव छैन भन्नुहुन्छ । उपेन्द्र यादवबाट असन्तुष्ट भएर युवा जुझारु राजकिशोर यादव र जेपी गुप्ताको साथमा काम गर्नुभयो तर उहाँहरु पनि सत्ता स्वार्थमा लागेर मधेशलाई विर्सेको आरोप लगाउँदै उहाँ मातृका यादवको साथमा आन्दोलनमा उत्रिनुभयो । विगत १० वर्षको मधेश सघर्षमा अनवरत संघषरत रहनुभएका यादवसँग सहाराटाइम्सले सप्तरीमा गरेको कुराकानीः
मधेशी युवामध्येका तपाई एक पुरानो राजनीतिक कार्यकर्ता हुनुहुन्छ अनि किन एकाएक ओझेलमा पर्नुभयो ?
–यसलाई यसरी बुझौं । समाजमा कुनै युवाले आफ्नो लक्ष्य अनुसार पढाई लेखाई सकाएका हुन्छ, एमए, बीए पढेका हुन्छन् र त्यसले समाजलाई आउटपुट अथवा आफ्ना आमा बुवाको इच्छा पूरा गर्छन्, आमा–बुवालाई एउटा घर बनाएर दिन्छन् भने सबैलाई लाग्छ उसले केही गरिरहेका छन् । उसले समाजका लागि आउटपुट दिइरहेका छन् । यो समाजको दृष्टिकोण हो । कुनै मान्छे मलेसिया जान्छन् । उ पढे लेखेका हुँदैनन् । समाजमा उसको कुनै प्रतिष्ठा थिएन, उ समाजका लागि केही गरिरहेका थिएन जब मलेसियाबाट फर्कन्छन् उ आफ्नो घर बनाउँछन्, आमाबुवालाई सेवा गर्छन्, समाजमा केही योगदान दिन्छन् भने त्यसको महत्व त्यहीबाट शुरु हुन्छ । यस्तो छ हाम्रो समाज । तर यो हेर्ने कुरा मात्र हो । त्यस्तै हो हाम्रो पोल्टिक्स । कुनै व्यक्ति कुनै पदमा छन्, उ पदमा बसेर केही गरिरहेका छन् भने मात्र उसलाई समाजले मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् तर मेरो मान्यता अलि फरक छ । मैले जहाँ जहाँ योगदान दिए त्यहाँ मेरा पनि चर्चा छ । मैले एउटा एनजियोमा काम गरेका थिए त्यहाँ मेरो चर्चा छ । मैले केही दिन बोर्डिगं स्कूलमा पढाए त्यहाँ पनि मेरो योगदानको चर्चा छ । केही दिन सरकारी स्कूलमा पनि पढाए त्यहाँ पनि मेरो कार्यको चर्चा छ । रह्यो राजनीतिको कुरा । त्यो सबैलाई थाह भएकै कुरा हो । पहिलो मधेश आन्दोलनदेखि हालसम्म मैले मधेशका लागि योगदान दिएकै हो । मेरो योगदान कही कमी छैन तर म कुनै पदमा नभएका कारणले मेरो योगदानको चर्चा छैन ।
तपाई पदमा नगएको होइन, तर त्यहाँ टिक्नु भएन किन ?
–चलन चल्तीका एउटा राम्रो भाषा छ, पछि परेका र पछि पारिएका । जुन उत्पडित समुदायहरु छन् उसले भन्छन् हामीलाई पछाडी पारिएको छ । जुन शासक वर्ग छन् उसले भन्छन् उ पछि परेको छ । यस्तै थुप्रै व्यक्ति छन् जो कुनै पदमा नभएपनि यो देशमा यो समाजमा उसको अग्रणी भूमिका रहेको छ । ती योद्धाहरु, ती क्रान्तकारीहरु अहिले यहाँ छैन, कतिपयको मृत्यु भयो, कतिपय यो देश छाडेर कतार मलेसिया गए तर म यो देशका क्रान्तिमा शुरुदेखि संलग्न छु, म आफ्नो भूमिका कहिले कम गरेको छैन । चाहे कुनै व्यक्तिले सम्झोस वा नसम्झोस् । कुनै पार्टीले याद गरोस् या नगरोस् । कुनै संगठनले सम्झोस् या नसम्झोस् । तर मलाई विश्वास छ समाजले एक दिन मूल्यांकन गर्नेछ । म मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालमा शुरुदेखि लागेको व्यक्ति हुँ । यदि मैले पनि चाहेको भए राजकिशोर यादव जस्तो, सत्रुधन महतो कोइरी जस्तो यस्ता थुपै्र छन् उनीहरु जस्तो म मन्त्री बनेको भए आज समाजमा मेरो जुन मूल्यांकन छ, जुन प्रतिष्ठा छ सायद त्यो रहने थिएन होला । आन्दोलन मधेश मुक्तिका लागि भएको थियो, जबसम्म मधेशले मुक्ति पाउँदैन तबसम्म सत्ताको खेलमा लाग्नु हुँदैन्थ्यो भने मेरो सोच र अडान थियो र छ पनि । तर मधेशी दलका नेताहरु त्यही सत्ताको खेलमा लागेको कारण आज मधेशको यो अवस्था भएको छ । मधेशमा १० वर्षमा तीनवटा क्रान्ति भयो त्यो उपेन्द्र यादव, राजकिशोर, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरुका कारण होइन, हामी जस्ता युवाका कारणले भएको हो जो कुनै स्वार्थमा नलागि निरन्तर क्रान्तिमा लागि रहे । नेताहरु मन्त्री भएको बेला पनि हामी मधेश मुक्तिको सपना देखथ्यौं । त्यही कारणले आज सो सम्भव भएको छ । आज त्यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ । सत्ता र संघर्ष सम्मान रुपमा अगाडि बढ्न सक्दैन ।
हामीलाई जहाँसम्म थाह छ, उपेन्द्र यादव काठमाडौ आउँदा तपाईलाई भेट्न किर्तिपुर जानु भएको थियो, उहाँलाई अगाडि बढाउनमा तपाईको योगदानको चर्चा अहिले पनि छ तर किन पछाडी पर्नुभयो ?
–जब अवसरवादी चरित्र कुनै क्रान्तकारी प्लेटफर्ममा हावी हुन्छ, तब त्यहाँ सच्चा क्रान्तकारी टिक्न सक्दैन । फोरम नेपाल जुन एउटा प्लेटफर्म थियो त्यो कुनै पार्टी थिएन, विना सल्लाहले पार्टीमा कन्भर्ट भयो । अफ्रिकन नेशनल काँग्रेस कुनै पार्टी थिएन । जबसम्म क्रान्ति सम्पन्न भएन तबसम्म त्यो पार्टीमा रुपान्तरण भएन । फोरम नेपाल पनि त्यस्तै संगठन थियो । मधेश मुक्ति नभएसम्म पार्टीमा रुपमान्तरण नहुने कसम खाएको भए आज मधेशी जनताले मुक्ति पाइसकेर अगाडि बढी सकेको हुन्थ्यो तर त्यस्तो भएन । पहिलो मधेश आन्दोलनबाट मसिहा बन्नुभएका उपेन्द्र यादवलाई जनताको सम्मानले पुगेन र उहाँ सिहदरवार छिर्नुभयो । जब उपेन्द्र यादव पार्टी बनाएर आफै सिहदरवार छिर्नुभयो । त्यहाँ क्रान्तकारी छवी भएकाहरुको ठाउँ रहेन । विस्तारै विस्तारै सबै अलग हुँदै गए, अवसरवादीहरु हावी हुँदैन गए । र, राजनीतिकमा यो स्वभाविक कुरा हो । फोरम नेपाल पार्टी भएपनि जुन व्यक्तिलाई भित्र्याए त्यसले सो प्लेटफर्मलाई गैर क्रान्तकारीमा रुपान्तरण गर्यो । अहिलको आन्दोलनले एउटा कोर्स लिन सकेन भने कुरा किन बाहिर आइरहेको छ । पहिलो मधेश आन्दोलनले जुन सफलता हासिल गरेको थियो त्यो अहिले किन गर्न सकेन त्यहीबाट सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ । पहिलो मधेश आन्दोलनमा जुन व्यक्तिहरुको संलग्नता थियो, जसले नेतृत्व गरेका थिए, ती व्यक्ति र ती नेतृत्वको अभाव देखियो यसपालीको आन्दोलनमा । त्यही भएर यो सफल हुन सकेन । राजेन्द्र महतोले माधव नेपाल कहाँ गएर भन्नुहुन्छ, मलाई तेलबाला मन्त्रालय दिनुभएन भने म सरकारमा सहभागि हुदिन । उपेन्द्र यादव झलनाथ खनाललाई गएर भन्नुहुन्छ, गच्छदारजी उपप्रधानमन्त्री बन्नुभयो, म पनि उपप्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ । यो कुराले स्पष्ट हुन्छ कि मधेश मुक्तिको सवाल कुन दिशामा गइरहेको छ ।
क्रान्तिकारी नभए सगठन कमजोर हुन्छ भन्नुहुन्छ तर तपाईहरु जस्ता क्रान्तकारीहरु त्यहाँ बस्नुपर्ने हो तर किन छाडेर हिड्नुहुन्छ ?
–बलराम यादव संगठन विभागको सदस्य हो, त्यहाँबाट बलराम यादवलाई हटाएर रेखा यादवलाई राख्छन् भने तपाई कुन आधारमा त्यहाँ बसेर आफ्नो अनुकुलतामा सगठन चलाउनु हुन्छ ।
म मात्रै क्रान्तकारी त्यहाँका अरु सबै अवसरवादी हुन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
–सबै अवसरवादी होइन, त्यहाँ क्रान्तकारीहरु पनि छन् । तर, विस्तारै उहाँहरु लाई पनि साइड लगाउँदै छन् । हामीमा लिडरसीप डेभलपमेन्ट भएको थिएन, डेभलेपमेन्टको क्रमै थियौं । हामी निर्माणको क्रममा थियौं त्यसबाट नेतृत्व डराएका थिए कि उनीहरुमा नेतृत्व गर्ने क्षमताको विकास भयो भने हामीलाई असर गर्छ त्यही भएर नेतृत्व विकास नहुँदै, सबैलाई साइड लगाइयो । अर्को कुरा मधेशवादीको पनि विकास हुन सकेन । उपेन्द्र यादव कम्युनिष्ट ब्याकग्राउण्डबाट आउनु भएको छ भने महन्थ ठाकुर काँग्रेस व्याकग्राउण्डबाट आउनु भएको छ अनि मधेशवादको विकास कसरी सम्भव हुन्छ । अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने जहिले पनि उपेन्द्रको यादवको झुकाव प्रचण्डतिर रह्यो भने महन्थ ठाकुरको झुकाव काँग्रेसतिर रह्यो ।
ल ठिक छ उपेन्द्र यादव अवसरवादी हुनुभयो रे तर तपाई त राजकिशोर, जयप्रकाश गुप्ता, बीपी यादवलगायतका क्रान्तिकारीहरुसँग पनि बस्नु भयो तर त्यहाँ पनि टिक्नुभएन किन त्यहाँ के भयो ?
–राजकिशोरको बारेमा भन्नुहुन्छ भने राजकिशोर कुनै राजनीतिक ब्याकग्राउण्डका व्यक्ति होइन । मधेश आन्दोलन भयो, त्यसमा उहाँ सभासद् भएर आउनु भयो मन्त्री पनि बन्नुभयो तर मन्त्री भएपनि उहाँमा राजनीतिक चरित्र, राजनीतिक सुझबुझ देखिएन । फेरि भन्नुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई किन साथ दिनुभयो । पोल्टिक्समा विभिन्न प्रयोगहरु हुने गर्छन् । राजकिशोरमा राजनीतिक संस्कार नभएपनि युवा त हुन्, केही गर्न सक्छ, सम्भावना त छ भनेर नै साथ दिएका थियौं । तर, उहाँले पनि अवसरवादी चरित्र देखाउनुभयो । नेतृत्व विकास गर्नेतिर लाग्नुभएन । सत्ता स्वार्थमा यसरी रुमलिनुभयो कि पछाडी फर्केर हेर्नुभएन आज उहाँको अवस्था कस्तो छ सबैलाई थाह छ । जसरी कोर मधेशको क्रान्तिमा लाग्नु भएका स्व.गजेन्द्रनारायण सिह सत्ता र क्रान्तिलाई सँगसँगै लाने प्रयास गर्नुभयो अहिले ठिक त्यस्तै भइरहेको छ । मधेशवादी दल पनि सत्ता र संघर्षलाई सँगै लगिरहेको छ । त्यही कारणले गजेन्द्रबाबु सफल हुनुभएन आज मधेशवादी दल पनि सफल हुन गइरहेको छैन ।
उपेन्द्र यादवसँग रहेर एउटा प्रयोग गर्नुभयो, त्यहाँ सफल हुनुभएन, राजकिशोर, जेपीसँग रहेर त्यहाँ प्रयोग गर्नुभयो, त्यहाँ सफल हुनुभएन, एउटा क्रान्तकारी जुझारु नेता मातृका यादवसँग पनि रहेर प्रयोग गर्नुभयो, त्यहाँ पनि तपाई हुनुहुन्न अब कस्तो प्रयोगको तयारीमा हुनुहुन्छ ?
–जुन समयमा उपेन्द्र यादव, विजयकुमार गच्छदाहरु प्रचण्डसँग मिलेर संसदमा हँगामा गरिरहनु भएको थियो, त्यही बेला हामीले मातृका यादवसँग मिलेर संयुक्त मधेशी राष्ट्रिय आन्दोलन समिति गठन गरे । मधेशी दल सत्ता स्वार्थको राजनीतिकमा भएका कारणले नयाँ ढंगबाट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका लागि मातृका यादवले यो समिति बनाउनु भएको थियो । त्यसमा म प्रवक्ताको भूमिकामा थिए । मातृका यादवको साथ सहकार्य रह्यो । मातृका यादव माओवादी केन्द्रमा फर्किनुभयो । उहाँ हामीसँग सल्लाह गरेर नै जानु भएको छ । उहाँ गएपछि हाम्रो सहकार्य समाप्त भएको छैन । अहिले पनि हाम्रो सहकार्य जारी छ । अहिले पनि मातृका यादवले मधेशमा एक मधेश एक प्रदेशको कुरा नै उठाई रहनुभएको छ । आन्दोलन शिथिल भएका छन् तर मातृका यादवलगायत हामी विचलित भएका छैनौ, आन्दोलनको तयारी भित्रभित्र भइ नै रहेको छ । हाम्रो सहकार्य निरन्तर चलिरहन्छ ।
तपाई तीनटा पोलमा काम गर्नुभयो, मधेशप्रति इमान्दार र कर्तव्यनिष्ट कसलाई पाउनुभयो ?
–मैले अघि पनि संकेत गरेका थिए । मैले काम गरेकोमध्ये मातृका यादवमा जुन सुझारुपन, जुन इमान्दारीता, लगनशिलता पाए त्यो अरु मधेशी नेतामा पाउन सकिन । उहाँले उठाएको मुद्दामा अझै कायम रहनु भएको छ । उहाँले मधेशलाई अझैसम्म धोका दिनुभएको छैन । त्यही भएर मातृका यादव अहिले पनि मधेशको आवश्यकता हो ।
मातृका यादव वामपन्थी हुनुहुन्छ, तपाई लोकतन्त्रवादी अनि कसरी सम्भव भयो यो फ्युजन ?
–हामीले आफ्नो समितिमा लोकतन्त्रवादी र वामपन्थी दुवैलाई मिलाएर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने व्यवस्था गरेका छौ । मधेशप्रति प्रतिवद्ध, लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध, वामपन्थी विचारधारहरुको फ्युजन भएको छ । यसमा कम्युनिष्टको मात्र विचारधारा छैन ।
अब अलिकति प्रसंग बदलौं । तपाई मधेशका तीनटै आन्दोलनमा सक्रिय भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो, अहिले मधेशको अवस्था यस्तो छ, अब मधेशको सेफल्याण्डिङ् कस्तो होला जस्तो लाग्छ ?
–उत्पीडित जनताको अधिकार दिनु नै अहिलेको सेफल्याण्डिङ् हो । बाटो क्लियर छ । कुनै बगैचा छ त्यसमा एउटै गुलावको फूल छ, त्यो धेरै राम्रो छ तर त्यसले मात्र त्यो बगैचाको शोभा बढाउदैन । बगैचाका लागि हरेक प्रकारको फूल नै चाहिन्छ । तर अहिलेको राज्यसत्ताले हरेक प्रकारको फूल फुल्न दिने पक्षमा देखिएको छैन । हरेक प्रकारको फूल फुल दिएन, कुनै सेफल्याण्डिङ दिएन भने देशमा जे पनि हुनसक्छ । गृहयुद्ध हुनसक्छ, देश टुक्रिन सक्छ । बल राज्यको कोर्टमा छ ।
मधेश स्वतन्त्र हुने लाइन समातिसकेको छ त ?
–जनता त्यतातिर अहिले सोचेको छैन । म अघि नै भने कि राज्यले मधेशी जनतालाई त्यतातिर सोच्न बाध्य नपारियोस् । यदि राज्यले मधेशलाई चाँडै सम्बोधन गरेनन् भने त्यो लाइनमा जानसक्छ । जसरी ज्ञानेन्द्रले उटपट्याङ्ग गरेपछि गणतन्त्र स्थापना भयो त्यसरी नै केपी शर्मा ओलीले अहिले उटपट्याङ गरिरहनु भएको छ यसले सिके राउतलाई फाइदा पुगिरहेको छ । सिके राउतले त ओलीलाई धन्यवाद पनि दिइसक्नुभएको छ । ओलीले तथाकथित राष्ट्रवादको कुरा उठाएर मधेशलाई समस्यामा पारेको छ ।
मधेशी जनता चुनावी मुडमा कतिको छ ?
–तपाई मधेशमा घुम्नुस् जनतालाई सोध्नुस् उहाँहरुले एउटै कुरा भन्नुहुन्छ तपाईहरुले मधेशबाट के पाउनुभयो । भारदहमा विरेन्द्र रामको मृत्यु भयो जुन दलित हुनुहुन्थ्यो । विराटनगरमा ऋषिदेवको मृत्यु भयो उहाँ सदाय हुनुहुन्थ्यो । थारुको पनि मृत्यु भएको छ । मधेशका सबै समुदायले आफ्नो अधिकारका लागि सहादत दिए तर के पाउनु भयो भने सबैले प्रश्न गर्नेगर्छन् । वास्तविकता यही हो । मधेश आन्दोलनबाट के प्राप्त भयो जो चुनाव गर्ने । चुनावभन्दा पहिले मधेशीको अधिकार सुनिश्चित हुने गरि सविधानको संशोधन होस् भनि मधेशी जनता चाहेका छन् । चुनावको मुडमा छैन ।